Rasaasa News – Jijiga: Ha ka Qadin Qaan Baxa Atoobiya, …. Qaado Axankaaga!
Jijiga: Ha ka Qadin Qaan Baxa Atoobiya, …. Qaado Axankaaga!
on February 24, 2014 12:07 pm
Jijiga: Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan qurba joogta u dhalatay degaanka Somalida Atoobiya (Ogaden), ee aan wali iman degaanka Somalida Atobiya in ay la soo xidhiidhaan xafiiska Qurbo joogta Esrdiasporaoffice@gmail.com., cabdib2@gmail.com. Si loola socodsiiyo arimo khuseeya boosaska la siin doono.
Ogaysiiskaas, waxaa xigay canaantii qurbo joogta Jijiga, oo ku beegnayd habeenkii xidhitaanka tartanka dhaantada dhalaanka. “Qashinka iyo Qurbo joogtuba qiimo ma leh” sidaas waxaa yidhi Cabdulahi Yusuf Weerar mar uu todobaadkii hore kula hadlay qurbo joog qolka shirka Hidhaar 29, Jijiga.
Qurbo joogta u dhalatay dhulka Somalida Ogadeeniya oo mudo saddex sano ah iska daba meeraysanayey Jijiga iyo Addis Abab, ayaa arinta ugu wayn ee ay u tageen dalka ahayd in la siiyo boos.
Sida aan xogta ku helay qaar ka mid ah qurbo joogta, ayaa la siiyey boosas, qaarna ilaa iyo hada waxay sugayaan sidii ay u heli lahaayeen dhul.
Qaar ka mid ah kuwa la siiyey boosaska, oo saddex sano joogay ayaa sheegay in ay dhibaato ka haysato. Qurbo joogan, ayaa sheegay in kolkii uu dalka imanayey uusan lacag haysan, laakiin la siiyey dhul bilaasha ah, mudo ka dibna lagu amray in uu dhiso dhulka. Maadaama aanan lacag haysan buu yidhi, waxaan damcay in aan iibsado booska, nasiib daro waxaan ogaaday in aanan lahayn booska oo aanan iibin karin.
Haatan, waxaa degaanka jooga qurbo joog badan oo dan laawe-yaal ah. Kuwaas oo kolkii hore loogu talo galay in ay dibada kula dagaalamaan gobonimo doonka ONLF. Waxaana muuqata in ONLF, ay siyaasadeedii dibadu aad u xoogaysatay, kasbatayna dad badan.
Booqashadii hogaaminta Ismaamulka ee dibadu, waxay keentay niyad jab, ka dib kolkii lagu weeraray Hoteelkii ay deganaayeen iyo safaarada Atoobiya.
Dhawaan waxaa la isugu yeedhay qurbo joogta shir ka dhacay qolka shirka Hidhaar 29. Hadlkaas oo madaxwaynaha Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI] uu canaan dusha kaga tuuray qurbo joogta. Waxaa kale oo isaguna qashin ku sheegay qurbo joogta hogaanka nabadgaliyada Cabdulahi Yusuf Weerar.
Waxaa kale oo la sheegay in qiimaynta maamulka ay garab socoto, qiimaynta lagu hayo qurbo joogta. Kuwaas oo la sheegay in loo kala saari doono labo; kuwo la siiyo lacag ay dibada kagala dagaalmaan ONLF iyo taageerayaasheeda iyo kuwa lagu sii wado u jooga boosaska.
FG. Waxaa la yaab leh, in qof Maraykan ah, oo Visa ku jooga Jijiga, uu ogolaado in loola dhaqmo si ka liidata, sida uu Ismaamulka Somalida Itoobiya ula dhaqmo dadka shacabka ah ee hoos jooga.